वैदेशिक लगानी घटेपछि अर्थमन्त्रीले भने ‘प्रक्रियामा सहज गरिदिनू’ – Yess Khabar
वैदेशिक लगानी घटेपछि अर्थमन्त्रीले भने ‘प्रक्रियामा सहज गरिदिनू’
२२ माघ २०७५, मंगलवार १२:४९ February 5, 2019 by Yess Khabar
वैदेशिक लगानी घटेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चासो देखाएका छन्। वैदेशिक लगानीसम्वन्धी प्रक्रियालाई छोट्याउन र सहज गर्न उनले राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरुलाई निर्देशन दिए।
अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति बैठकमा खतिवडाले आन्तरिक स्रोत परिचालनले मात्र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने भन्दै वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग विभाग तथा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समय लम्बिने गरेको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन, उल्टै घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा विदेशी लगानी ३९ प्रतिशतले कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म नेपालमा कूल ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिदेशी लगानी आएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपाल भित्रिएको थियो। वैदेशिक लगानी घट्दा शोधनान्तर स्थितिको घाटा चुलिँदै गएको छ भने संचिती विदेशी मुद्रामा समेत कमी आएको छ।
मुलुकको पछिल्लो वित्तीय समस्याका बारेमा अर्थमन्त्रीले गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, बैंक अफ एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिषदका पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गरेका हुन्।
सो अवसरमा खतिवडाले बैंकहरुलाई विदेशी स्रोत परिचालनमा थप सहजीकरण गर्न आवश्यक भए सोतर्फ ध्यान दिन गभर्नरलाई आग्रह गरे। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भारुसहित विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरे पनि एनएमबिबाहेक अन्यले ल्याउन सकेका छैनन्।
बैठकमा अर्थमन्त्रीले बैंकहरुले ऋणमा लिइरहेको व्याजदरका सम्वन्धमा पनि चासो देखाएका छन्। मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा आधार व्याजदर र निक्षेप तथा कर्जामा लिने व्याजदरको फरकको बारेमा अध्ययन गरी यस तर्फको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए।
यसअघि उद्योगी व्यवसायीहरुले व्याजदर बढी भएको, उद्योग व्यवसायको लागत उच्च हुँदा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि मात्र नभई दिर्घकालिन रुपमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा खतिवडाले जोड दिए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि औद्योगिक प्रर्वद्धन मैत्री भएर समय सापेक्ष साधन परिचालन गर्नुहोस्’ उनले भने।
Prevसांसदको सुविधामा साढे ४ करोड खर्च
Next३३ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त हरिशरण खड्का दुबईमा पक्राउ